Ụbọchị My Pet » Jọrọ njọ Eziokwu Banyere Modern dịwara
emelitere ikpeazụ: Oct. 16 2020 | 2 min agụ
Ka ihu ya, anyị agaghịkwa na-ebi ndụ dị mma ol’ ụbọchị ebe ịhụnanya na mbụ n'anya ghọọ mbedo nke mere ka a obi ụtọ, ogologo alụmdi na nwunye. Na ọganihu nke nkà na ụzụ, egwu nke nkwa, na elu nke ekwesịghị ntụkwasị obi, oge a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị adịghị mfe. Na ndị mụrụ ke mbubreyo narị afọ nke 20, anyị karịsịa mara nnọọ otú ike mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ.
Onye na-eche banyere obere nwere ike niile na mmekọrịta na ọ dịghị onye chọrọ ịbụ onye nwere ihe mmasị n'ihi na ọ bụ nnọọ ngwangwa. N'ihi na anyị na-achọghị na-egosi ok u n'obi, anyị na-agbasaghị na-awa ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ụbọchị oroma azụ. Ndị a psychological egwuregwu na-adịghị onye ọ bụla nke na-atọ ụtọ.
Ekwentị oku na-a na-anwụ anwụ nkà n'ụdị. Ọtụtụ nkwurịta okwu n'oge na-eme site na ozi ederede nke bụ n'ezie ndị kasị na-abụghị onye ụdị nkwurịta okwu.
Atụmatụ tupu na mwube ụbọchị nēche agaghị eme eme. N'ihi mmadụ mgbasa ozi, ọzọ ihunanya ọdịmma, na ndị enyi, AFỌ na-achọkarị ihe eketịbe nke oge karịa uche zubere si.
Nkebi ahịrịokwu dị ka “ka zuo ike” na “chọrọ fechapụta” bụ koodu n'ihi “ka jikọọ”. Ma mgbe ọtụtụ ụjọ na-ozi ndị a, ha na-abụkarị ndị kasị ewu ewu ụzọ na-agba onye na-eji oge ụbọchị ndị a.
Ụfọdụ ndị mmadụ na-adịghị achọ a mmekọrịta, ha dị nnọọ chọrọ jikọọ. O di nwute na, kacha nke oge a na-adịghị kwuru ruo mgbe eziokwu. Naa, n'eziokwu na-nnọọ adịkarịghị eji.
Ọtụtụ ndị na-atụ egwu nke nkwa nke na-eduga “anyị na-na dị nnọọ okwu” mmekọrịta. Ọ bụghị nanị na nke a ghara ịma edoghi, ndị a mmekọrịta agbasaghị mgbe ikpeazụ. Ndị a labeelu-free mmekọrịta abụkarị kwụsị na otu onye n'ịghọ aghụghọ ule ma ebe ọ bụ na mmekọrịta bụ mgbe ukara mgbe ahụ n'ịghọ aghụghọ ule “mgbe n'ezie mere”.
Social media jupụtara ọnwụnwa na ohere kpafuo. N'onwe ozi na aghụghọ achụ dị ka Ekwughị a foto na-enwekwu ohere maka n'ịghọ aghụghọ ule. Social media na-egosi nhọrọ ịhụ ndị ọzọ bụ na e nwere, ọ bụ agaghịkwa dị nnọọ a ụzọ na-akpọ ezinụlọ na ndị enyi. Social Media na-eji na-egosipụta mmetụta. Ọnọdụ mmelite na gwa foto banyere ịhụnanya, mgbe ọ bụghị banyere gị ozugbo, bụ ụzọ ọhụrụ nke na-ekwupụta ndị’ ezi mmetụta.
O di nwute na, n'oge ọ bụ nnọọ ike ịhụ onye nke ọzọ kpamkpam unfiltered. N'ozuzu, ndị mmadụ na-atụ egwu ịbụ ezi na-etinye onwe ha si n'ebe ọbụna mmekọrịta. Nke a echiche nke ụjọ bụ n'ihi na ha achọghị ka-egosi dị ka onwe dị, kwa na-echegbu onwe, kwa dorky, kwa mma, kwa mma, bụghị na-ezuru, wdg. Gịnị dị anyị nile mkpa maara bụ na mgbe ị na-ezi onye na-, ha ga-anabata akụkụ nile nke ị.
Egbu, onye ọ bụla na ị ga-esi ihunanya ga-ma ejedebe ịbụ ndụ gị na onye òtù ọlụlụ ma ọ bụ na ị ga-emecha bibie – ma ndị a dị adị n'ezie na-eyi egwu. Mgbe oge a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị abụghị ndị kacha, ọ bara uru na ọgwụgwụ. N'ihi na mgbe anyị na-eme na-ahụ na pụrụ iche mmadụ, anyị na-agbasaghị kpọrọ ha niile ọzọ dị ka njem achọta ezi ịhụnanya bụ mgbe kwesịrị ya.